Chibereko chakarambidzwa chikadzi
Chibereko chakarambidzwa chikadzi chembeu yembanje chinozivikanwa nevatengi vedu veFrance neCanada se "Le fruit defu." Huru yake yeBlueberry indica genetics ndiyo inoitisa hwakawanda hunhu hwake, kusanganisira yakakura cola (yepamusoro bud) yakazadzwa neTC makristasi uye inonamira resin zvekuti dzimwe nguva inopenya bhuruu nepingi. Kure nekurambidzwa, tinokurudzira idzi mbeu kune vekutanga varimi, ma novice, uye connoisseurs zvakafanana. Iye anozochinja uye kukura achifara panze, mumba, kana mune greenhouse. Zvirimwa zvake zvakaumbana uye zviri pakati nepakati pakureba, uye zvinopa mabiko kuvarimi vake maziso. Iye anoratidzira iro rebhuruu uye pingi kupenya kwakadudzwa pamusoro apa pamasanganiswa akavhenganiswa emashizha egirini. Kunyangwe ari wepakati-kureba, gohwo rake rakanakisa. Chibereko chakarambidzwa chizere, hwema hwemuchero uchazadza nzvimbo yako inokura sezvaanokura muchikamu chake chemaruva. Iwe unozonakidzwa noutsi hwake hwakasimba uye hunofadza hunotevera neuchero michero. Chibereko chakarambidzwa chakakwira chinopa vanosvuta chizere chiratidzo chemuviri buzz uye vanyoro kumusoro kwakanyanya kutenderera.